कसरी अर्डर गर्ने - बीउहरू र विरूवाहरू विक्रिमा - KPR - मालीहरूको क्लब
बैंक शुल्क- तपाइको देशबाट रकम पठाउँदा कति खर्च हुन्छ
ढुवानीको समय- तपाइको अर्डर प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ ?
यूरोप - देशहरूको सूची
अर्डर गर्नका लागि सर्वोत्तम माध्यम e-shop हो।
तपाईंको अर्डरको भुक्तानीका लागि यी माध्यमहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छः
१. नगद भुक्तानीः यसका लागि रजिष्ट्री चिठी प्रयोग गर्नुपर्नेछ। (हामीले यूरो, जेच क्राउन र यूएस डलरमा हुने भुक्तानी मात्र स्विकार गर्छौं।)
२. आन्तरिक बैंक ट्रान्सफर वा बैंकमा नगद जम्माः बुल्गेरिया, चेकिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया वा सर्वियामा रहेको हाम्रो बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। बुल्गेरिया, चेकिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, सर्विया
३. स्लोभाकिया / जर्मनीमा रहेको हाम्रो बैंक खातामा बैंक ट्रान्सफर (अन्तर्राष्ट्रिय मनि अर्डर) गरेर
४. बुल्गेरिया / रोमानियामा रहेको हाम्रो बैंक खातामा ProPay बैंक ट्रान्सफर (देशको सूची हेर्नुहोस्) गरेर
५. Eurogiro - OUR मार्फत्
६. वेस्टर्न युनियन मार्फत् *
७. वा भुक्तानीको अन्य माध्यमबाटः तपाईंको सहज कारोबारका लागि हामी सवै खालका भुक्तानीका माध्यमहरु स्वीकार गर्छौ।
बैंक ट्रान्सफर भने बुल्गेरिया, चेकिया, जर्मनी, हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, सर्विया वा स्लोभाकियामध्ये जुनसुकै देशमा रहेको हाम्रो बैंक खातामा गर्न सक्नुहुनेछ। - स्लोभाकिया, बुल्गेरिया, चेकिया, हंगेरी, पोल्याण्ड, रोमानिया, सर्विया
युरोपियन युनियनमा रहेका धेरै बैंकहरुले सही क्धषत कोड (IBAN code) र क्ष्द्यब्ल् कोड (SWIFT code) उपलब्ध गराएको हकमा युरोपियन युनियनभित्र निःशुल्क अन्तर्राष्ट्रिय मनि अर्डर सेवा उपलब्ध गराउँछन्। हाम्रो बैंकले यस भुक्तानीका लागि कुनै पनि शुल्क लिँदैन।
हुलाक महशुल दर
अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरु जेचियाबाट पठाइन्छ। तल दिइएको हुलाक महशुल दर सामान्य जानकारीका लागि हो। तपाईंको अर्डर प्राप्त भएपछि हामीले तपाईंको देशमा ढुवानी गर्दा लाग्ने शुल्कको जानकारी दिनेछौं।
इकोनोमिक - बीमा नगरिएको
गन्तव्य अर्डरका लागि हुलाक महशुल दर यूरोमा
२५० ग्राम सम्म ५०० ग्राम सम्म १ किलोग्राम सम्म २ किलोग्राम सम्म अन्य
यूरोप - देशहरूको सूची4€6€ 8 € 12 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
सतहबाट संसार4€6€ 11 € 14 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
एयरमेलबाट संसार5€6€ 12 € 16 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
रजिष्टरी पत्र - बीमा गरिएको
यूरोप - देशहरूको सूची5€6€ 10 € 14 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
सतहबाट संसार5€ 8 € 12 € 15 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
एयरमेलबाट संसार7€9€ 14 € 20 € हामीले तपाईंलाई जानकारी गराउनेछौं।
सन् १९९८ देखि २००८ सम्म विरुवाहरु विक्रि गरेको इतिहास
सन् १९९८ देखि २००८ सम्म सिफारिस गरेको प्रजातिको संख्या
सामान्य शर्त तथा अवस्थाहरु
बीउहरु, सामानहरु र उत्पादनहरु भन्ने शव्दावलीले बीउहरु भन्ने मात्र नभई विरुवाहरु, विरुवाका भागहरु वा अन्य विरुवा प्रजातिसँग सम्वन्धित शव्दावलीलाई जनाउँछन्।
योजना तथा मूल्यहरु
सामान्यतयाः सवै मूल्यहरु यूरोमा उल्लेख गरिएका छन्। हामीले जेच क्राउन र अमेरिकी डलरमा पनि रकम स्विकार्छौं। स्विकार गरिने अन्य मुद्रामा सटही गर्दा हाम्रो विनिमय दरअनुसार गर्नुपर्नेछ। उल्लेखित मूल्यमा ढुवानी खर्च समावेश गरिएको छैन। मौसम, अन्य बीउहरुको उपलब्धता, बीउ स्याहार्दा, प्रशोधन गर्दा र संचित गर्दा हुने कठिनाईको मात्राका आधारमा मूल्यमा फरक पर्दछ। यो मूल्यसूची (www.kpr.sk मा प्रकाशित)ले विगतमा प्रकाशित मूल्यसूचीलाई विस्थापित गरेको छ। विगतको विक्रिका आधारमा स्टकको उपलब्धता कायम रहन्छ। कुनै पनि भुक्तानी गर्नुअघि स्टकको उपलब्धता परीक्षण गर्नुहोला।
तपाईंको भुक्तानी ढुवानी अगाडि नै हामीकहाँ आइपुग्नुपर्नेछ। KPR अर्डरको निश्चित गरेको १५ दिनभित्र भुक्तानी प्राप्त भइसक्नुपर्नेछ।
भुक्तानी प्राप्त हुनासाथ हामीले तपाईंको अर्डर डिस्प्याच गर्नेछौं। बीमा नगरिएको सामान बीचमै हराएमा हामी जवाफदेही हुनेछैनौं।
KPR अनुमतिमा अर्डरको खारेजी गर्न सकिनेछ।
KPR २ बर्षको ग्यारेन्टीसहित यी ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउँछः
- बीउहरु ताजा, सक्रिय र अंकुरण हुन योग्य छन्।
- बीउ तथा विरुवाहरु उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार र किटाणुरहित छन्।
हाम्रो उत्पादन प्राप्त हुनासाथ २ बर्षे वारेन्टी शुरु हुन्छ।
दावी तथा फिर्ता
सबै अर्डरहरु प्राप्त हुनासाथ तत्काल परीक्षण गर्नुपर्नेछ र कुनै दावी भएमा सामान प्राप्त भएको १५ दिनभित्र केपीआरमा लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ।
बीउहरु रोपेपछि, नराम्रोसँग ढुवानी वा संचय गरेपछि गरिएको दावीलाई KPR स्विकार्नेछैन। हाम्रो पूर्वअनुमति विना बीउहरु फिर्ता नपठाउनुहोला।
कुनै पनि माध्यमबाट अर्डर गर्नुले उल्लेखित सीमा तथा अवस्थाहरु स्विकार गरेको मानिनेछ।
पछिल्लो पटक परिवर्तन गरिएको 24.2.2019